Lifestyle News | Lumbini Online Patrika
अमेरिकी अन्तरिक्ष संस्था नासाले पहिलोपटक मानव वीर्य अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष केन्द्र (आइएसएस) मा पठाएको छ । अन्तरिक्षमा मानव जन्म सम्भव छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन नासाले परीक्षण गर्न लागेको हो। स्पेस एक्स फाल्कन ९ रकेटमा पठाइएको वीर्यलाई कसरी न्यून गुरुत्वाकर्षणले पुरुष सेक्स कोषलाई असर गर्छ भनेर विभिन्न परीक्षण गरिनेछन् । आइएसएसका अन्तरिक्ष...
सोमवार फागुन ७ २०७४ डा शिरीष कार्की
हामीमध्ये धेरैलाई कहिलेकाहीँ ढाड दुख्ने समस्या हुन्छ । यो कसैलाई कम हुन्छ भने कसैलाई बढी भएर औषधी नै खानुपर्ने अवस्था आउछ । चिकित्सककहाँ पुग्नेमध्ये अधिकांशको ढाड दुख्ने समस्या भएको पाइन्छ । यो पूरानो समस्या हो । कूल जनसंख्याको ८० प्रतिशत मानिसको जीवनमा कुनै न कुनै बेला ढाड दुख्ने समस्या भएको हुन्छ पनि भन्ने गरिन्छ । ढाड दुख्दा जति हामी आत्त...
ध्यान अतिन्द्रीय संवेदना शक्ति हो । जो मानिस ध्यान गर्छ, उनीहरूलाई कालक्रममा स्वयं सत्यको अनुभव हुन जान्छ । ध्यानबाट सम्पूर्ण आध्यात्मिक रहस्य जान्न सकिन्छ । यसको अभ्यास वा अनुभव धेरै कम मानिस गर्छन् । व्यस्तता यसको मूल कारण हो । मानिसले ध्यानलाई एकाग्रता गर्नुपर्छ र ध्यान केवल मानसिक व्यायाम हो । ध्यानलाई एकाग्रता सम्झिने मानिस मानसिक चेतनाल...
सधैँ स्वास्थ्य रहनु हरेक मानिसको चाहान हो । स्वास्थ्य रहनको लागी मानिसहरु विभिन्न उपायहरु अपनाउने गर्छन् । तर पनि मानिसको सा-साना गल्तीले गर्दा उनीहरु बिरामी पर्ने गर्छन् । हामीले आफु स्वास्थ्य रहनको लागी सबैभन्दा बडी ध्यान हामीले खाने खानेकुरामा दिनुपर्छ । हामीले खानेकुरा यदि पौष्टिकयुक्त भएन भने यसले हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर गर्छ । कतिपय खानेकु...
आफूलाई सामाजिक सञ्जालको लती भनी वर्णन गर्नुभयो भने अरू मानिसले प्रायः चिन्ता व्यक्त गर्दैनन् । खासमा ट्विटर र इन्स्टाग्राममा लेखिने बायोहरूमा यो कुराको उल्लेख भेटिन्छ । लिंक्डइन प्रोफाइलमा यस्तो दाबी गर्नुभयो भने तपाईंप्रति मिडिया र प्रकाशन कम्पनीहरूले चासो देखाउँछन् किनकि उनीहरू दक्ष डिजिटल नागरिकको खोजीमा हुन्छन् । तर कल्पना गर्नुस् त, कुनै दि...
शरीरलाई आवश्यक पर्ने उर्जाको कमी भएपछी मानिसलाई भोक लाग्ने गर्छ । भोक मेटाउनको लागी हामी विभिन्न प्रकारका खाने गर्छौं । तर कहिले काँही खाना जति नै खाए पनी हामीलाई धेरै भोक लाग्ने गर्छ । आफ्नो पेट भरिएर पनी तपाईलाई अझै भोक लाग्न सक्छ । विभिन्न रोगको कारण पनी मानिसलाई भोक लागी राख्ने गर्छ । भोक के कारणले गर्दा लागिरहेको छ भन्ने कुरा नबुजिकन हामीले...
यो एक वैज्ञानिक तथ्य हो कि, शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक स्तरले स्त्री र पुरुष दुबै अधूरो हुन्छ । अर्थात एकअर्कामा पूर्णता हुँदैन । जब दुबै एक हुन्छ, तव त्यसले पूर्णता पाउँछ । तर, यो पूर्णता पनि त्यसबेला मात्र मिल्छ, जब पति र पत्नीमा आपसी समझदारी, विश्वास, प्रेम, भरोसा हुन्छ । धार्मिक ग्रन्थ रामायणमा पनि पति पत्नीबीच के कस्ता गुण हुनुपर्छ भने...
के तपाईं पानी पर्याप्त पिउनु हुन्छ ?
सामान्यतया जाडोयाममा हामी थोरै पानी खान्छौं । शरीरमा पानीको मात्रामा कमी भयो भने पनि हामी भोक लागेको भ्रममा खानेकुरा खान्छौं र अनावश्यक ऊर्जा क्यालोरी थप्छौं । तर शरीरमा पानीको कमी भएको महसुस गर्दैनौं। अमेरिकाको द नेसनल एकेडेमी अफ मेडिसिनले पुरुषहरूले दैनिक ३.७ लिटर र महिलाहरूले २.७ लिटर पानी खान सुझाएको छ । शरीरमा पर्याप्त मात्रामा पानीको म...
बुधवार पौष १२ २०७४ रबर्ट प्रिट, हेल्थडे रिपोर्टर
हिजोआज हामीले पानी पिउने सिसाका गिलास अनेक रंगमा बुट्टाले सजाइएका हेर्दा सुन्दर हुन्छन् । तर यस्ता सिसाका गिलासमा हुने लिड र क्याडमियमको स्तर हाम्रो स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने एउटा बेलायती अध्ययनले देखाएको छ । युनिभर्सिटी अफ प्लाइमाउथका अनुसन्धानकर्ताले ७२ वटा पानी खाने गिलास जसमा बुट्टा बनाइका थिए, को अध्ययन गरे । यस्ता गिलासमा टमलर्स, ब...
ज्योतिष शास्त्रका अनुसार जुता लगाउन नजान्दा पनि बिग्रिन्छ भाग्य, शास्त्रले यस्तो भन्छ
हामीले बच्चादेखि नै सुन्दै आएका छौं कि जुता तथा चप्पल उल्टो पल्टिएको छ भने त्यसलाई सुल्टो (सीधा) पल्टाउनुपर्छ । बाटो तथा आँगन अगाडि उल्टो जुता देखियो भने साइत बिग्रिन्छ भन्ने मान्यता अहिले पनि छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार मानव जीवनसँग सम्बन्धित हरेक चीज कुनै न कुनै ग्रहसँग जोडिएका हुन्छन् । र यसै क्रममा हाम्रा जुता पनि आउँछन् । ज्योतिष शास्...
वास्तु शास्त्र अनुसार घरमा राख्ने नहुने यि ६ चिजहरु
मानव जिवनमा अति अावस्यकीय चिज मध्ये घर प्रमुख हाे । इच्छा र सपना अनुसार अाफु बस्ने घर के कस्ताे बनाउने हाे त्याे कल्पना गरी या चित्रण गरी बनाइन्छ । घर बनाइसकेपछि बिभिन्न सजावटहरू सुरू गरिन्छ तर कतिपय सजावटकै सामानले घरमा असन्तुलनीय बाताबरण शिर्जना हुन्छ । अाउनुस बास्तु शास्त्र अनुसार घरमा के राख्ने र के नराख्ने त्याे बिषयमा केही जान्ने काेशिस गर...
बुढेसकालमा लाग्ने बिर्सने रोग ‘डिमेन्सिया’ का लक्षणहरु यस प्रकार छन्
उमेर बढ्दै गएपछि मानिसमा बिर्सने रोग देखा पर्न थाल्छ । ६० बर्ष नागेपछि मानिसलाई सानोसानो कुरा पनि याद हुने गर्दैन । डिमेन्सिया रोग लागेपछि हाम्रो मष्तिस्कमा असर पुग्ने गर्छ । जसले गर्दा हाम्रो सम्झने शक्ति घट्ने गर्छ । यो डिमेन्सिया रोग सुरु भएपछि यस रोगका लक्षणहरु विस्तारै देखिन थाल्छन् र अलिअलि गरेर बढ्दै जान्छ। रोग बढिसकेपछि हिसाब गर्ने , आफु...
यस्ता व्यक्तिहरुमा बढी हुने गर्छ मष्तिस्कघात
मष्तिस्कघातका बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । मष्तिस्कघात अप्रत्यासित रुपमा अपर्झट हुने, तत्कालै ज्यान पनि जाने र बाँचिहाले पनि अधिकांश विकलाङ्ग, परनिर्भर र पराश्रीत भएर वाँच्नुपर्ने जटिलता यसले निम्त्याउँछ । ब्यस्त जीवनशैली र मानषिक तनाब धेरै लेने गर्नाले यो रोगको शिकार हुने गरिन्छ । यस रोगको शिकार हुनु भन्दा यस रोगबाट टाढा हुनु ...
विख्यात गायक बव् मार्लीका उत्कृष्ट भनाइहरू
मंगलवार पौष ४ २०७४ लुअप
१. आखाँ खोल र आफैलाई हेर त, के तिमीले जिइरहेको जिवन प्रति तिमी सन्तुष्ट छौ ? २. प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो भाग्य चुन्ने अधिकार छ । ३. संगितको बारेमा अउटा राम्रो तथ्य के हो भने जब यसले हान्छ तब केही पिडा हुदैन । ४. एउटा ढोका बन्द हुदाँ के तिमीलाई थाहा छ दोश्रो खुलेको हुन्छ । ५. थोरै मानिसले मात्र वर्षातको अनुभूत गर्दछन्, बाँकी रूझ्दछन्...
नेल्सन मन्डेलाका १० विश्वप्रसिद्ध आदर्शमुलक भनाईहरु
म महान कहिल्यै छैन, जबसम्म तिमी सोच्दैनौ सबै महान व्यक्ति भनेको सानै हुन्छ र सिकारु हुन्छ । नेल्सन मण्डेला दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति हुन् । उनको जन्म १८ जुलाई १९१८ मा भएको थियो । उनको राजनैतिक यात्रा भने सन् १९४८ बाट सुरु भयो । प्रथम अश्वेत राष्ट्रपतिका रुपमा उनी सन् १९९४ देखि १९९९ सम्म रहे । उनले आफ्नो जीवनको १८ वर्ष जेलमा बि...
शरीरमा यस्ता समस्या देखिँदा नगर्नुहोस बेवास्ता
हाम्रो शरीरमा विभिन्न प्रकारका समस्याहरु देखिने गर्छन् । तर हामी ति समस्याहरुलाई सामान्य रुपमा लिने गर्छौं । यसो गर्नु गलत हो । पछी गएर यी समस्याहरुले ठुलो रोग ल्याउने गर्छन् । समय समयमा अस्पताल गएर शरीरको जाँच गराउने गर्नुपर्छ । शरीरमा सेखिने हरेक लक्षणहरुको जाँच गराउनु जरुरी छ । यसले गर्दा हामीलाई स्वास्थ्य हुन मद्धत गर्छ । रोग लागेर पछुताउनु ...
उच्च रक्तचाप भएका व्यक्तिले जान्नै पर्ने केही सुझाव यस्ता छन्
शनिबार पौष १ २०७४ लुअप
व्यस्त जीवनशैली , खानपिनमा लापरवाही , शारीरिक व्यायामको कमी , तनाब आदिको कारण मानिसलाई उच्च रक्तचापको समस्याले सताउने गर्छ । उच्च रक्तचापले गर्दा मानिसलाई हृदयघात पनि हुनसक्छ । यसले गर्दा मानिसको ज्यान पनि जान सक्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो शरीरको रक्तचाप सधैँ नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ । यसका लागी हामीले हाम्रो दैनिक जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनु जरुरी...
क्यान्सरको सम्भावना कम गर्ने बन्दागोभीको फाइदाहरु जान्नुहोस्
बन्दागोभी हामी भान्सामा तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छौं । यसलाई हामी चाउमिनको स्वाद बढाउन र म:म बनाउनको लागी प्रयोग ग्रने गर्छौं । केहि मानिसहरु बन्दाकोभीको सुप बनाएर पनि खाने गर्छन् । बन्दाकोभी स्वादको लागी मात्रा नभएर हाम्रो स्वास्थ्यको लागी पनि फाइदाजनक छ । बन्दाकोभिको फाइदाहरु यस प्रकार छन् : १) तौल नियन्त्रण गर्छ : व्यवस्थित रुपमा ...
शनि ग्रहको अस्त: यी ४ राशि हुनेहरुको शुरु भयो शुभ दिन !
सबैभन्दा क्रूर मानिने शनि ग्रह ५ डिसेम्बरको दिन बिहान बाट अस्ताएको छ । र अब आउने ३४ दिनसम्मको लागि शनि अस्ताउने छ । जसको कारण शनिको कालो छायाँ केहि राशिहरुमा नपर्ने भएको छ । वास्तबमा ५ डिसेम्बरबाट ८ जनवरी २०१८ सम्म अस्ताउने भएको छ । हाल शनि धनु राशिमा रहेका छन् र अब डुबीसकेको छ । यहि मौकामा सुर्यले शनिको बक्र दृस्टीलाई निर्मूल पार्दिने छ...
सदैव खुसी रहनको लागी यी कुराहरु जरुरी छन्
खुसी हुनु भनेको हामी सधैँ स्वास्थ्य रहनु हो । मानिस खुसी हुँदा तनाबदेखि मुक्त हुने गर्छन् । जसले गर्दा उनीहरुलाई विभिन्न प्रकारको रोगहरु लाग्दैन ।हरेक मानिस आफु सधैँ खुसी रहीराखुम भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले हामीले सधैँ खुसी भएर बस्ने कोसिस गर्नुपर्छ । यसका लागी हामीले हाम्रो दैनिक जीवनशैलीमा धेरै ध्यान पुर्याउनु पर्छ । खुसी रहनको लागी हामीले हाम्र...